के सारो ठेलेको हाम्रो चाही शारीर हैन कि क्या हो? - Desi Sexy Stories MenuHomeForumSubmit Your Stories
MenuHomeIncestBro Sis Incest StoriesDad Daughter Incest StoriesFamily Group Incest StoriesGay, Lesbian Incest StoriesIncest Pregnant StoriesMom Son Incest StoriesOther Relations Incest StoriesCelebrity NudeRapeHumilation sex storiesNudes PhotosDesi Bhabi NudeDesi Nude PhotosNude photosEnglishDesiOfficeTeacher Ke Saath Sex StoriesCelebritywifeCouple Sex StoriesGirlfriend sex storiesHindi sex storiesMaid Servant sex storiesNaukar/Naukrani sex storiesSchool College Sex StoriesGroupExtreme Photos	Home » Nepali Sex Stories » के सारो ठेलेको हाम्रो चाही शारीर हैन कि क्या हो?
जिन्दगी बाँचुञ्जेलको रमाइलो त हो नि मरी लानु के छ र भन्दै उनको चाक ढाड काँध गाला मसार्दै किस गर्न थाले ।नशाको बेला यौन उन्मातभित्र पग्ली सकेकी उनले पनि हैन कत्रो छ हौ चेपेर नै थाला पारी दिन्छु र पो भन्दै मेरो लाडोलाई पेन्टबाहिर देखि खेलाउन थालिन् । मैले पनि सजिलोको लागि मेरो फास्नर खोलिदिए । मैले उनलाई च्याप्प समातेर जुरुक्क उठाएर फलैचामा ल्याए । बिस्तारै उनलाई सुताएर उनीमाथि चढी पुती माथि बस्दै २ हातले उनको स्तन गोबर सोहरेसरी सोहर्दै माड्न थाले । उनले पनि मेरो लाडोलाई मज्जा मानेर खेलाउदै लाडो त गतिलो रहेछ यसलाई चेप्न त हैन मेरो ढ्वाङ नै पो च्याती देला जस्तो लाग्यो भनिन । किन काकी काकाको सानो छ हो? मैले उनका दुधका मुन्टा खेलाउदै सोधे । सानो छ बुढी औंला जत्रो मात्र हालेको र निकालेको नै थाह हुँदैन उनले खुलेर भनिन। यस्तो हो भने पहिला नै मलाई भन्नु पर्थ्यो नि त म हाजिर हुने थिए तपाईंको सेवामा । हो हो एलिना पूजा मालबाँसे माइली वसन्त राम्री तिर धाउदै ठीक्क हुन्छ हेर्छ चै हामी जस्तो नानीको आमालाई।।।? हा हा हा हा हा हा म हाँसे । चित्त बुझ्यो ? फेरी प्रश्न गरिन । हो नि त मैले पनि साकारत्मक जवाफ दिए ए साँच्ची ब्लु फिल्म हेरेका छौ ? छु किन यस्तै गर्ने हो ?हो भने लौन त चुसिदिनुस् भन्दै मैले मेरो लाडो उनको मुखमा लागेर राखी दिए । अन्त के त भन्दै उनले त मेरो लाडोलाई चुस्ना पो थालिन् ओहो फिल्ममा हेरेको बाहेक मैले कसै केटीहरुलाई यसरी मुखमा मैथुन गर्न दिएको थिईन बरु छिटो छिटो चिक्दा चिप्लिएर कन्ढोमा भने गाको थियो यसरी चिप्लिदा २/३ जना रोएका पनि थिए।मलाई त उनले मुखमा राखेर चुस्दै भित्र बाहिर निकाल्दा त चिकेको भन्दा पनि तातो पो लाग्यो । कुत्कुती लागेर उखरमाउलो भए । फुत्त बाहिर निकाले मेरो लाडो झन चम्केर सनक्क भएर ठन्केको थियो । खै म पनि चाटी दिन्छु मलाई पनि आज नौलो अभ्यास गर्न मन लाग्यो किन भने जति पहिला गरेको चिकामारीमा न मैले चुसाएको थिए न चाटेको नै । अहँ हुँदैन उनले भनिन् मेरो फोहोर छ । केही हुँदैन मेरो पनि त फोहोर नै त थियो नि त । लु त्यसो हो भने यो फलैचामा टाटानको मजेत्रो ओछ्याउँ भन्दै मजेत्रो ओछ्याईन अब म पनि उनको बिपरीत फर्केर सुत्दै टाङ फार्न लगाउदै उनको पुतीमा हात पुर्याए । ए काकीले त भर्नु हो भने त ३०० मिली लिटर र पानी नै झारी सकेकी थिएछिन नि प्यान्टी त धुनलाई भिजाको जस्तै लपक्क भै सकेको थियो । हत्त न पत्त पेन्टी फुकाली दिएर जिब्रोलाई उनको पुतीको टुप्पामा लगेर जोडे आहा खै के खै के र्याल नै र्याल भएको उनको पानी झरेको पुतीको स्वाद चिप्लो र कस्तो कस्तो लाग्यो तर नौलो तरिका भएर मैले खुब रुचीको साथ नै चाट्न थाले । म जति उनको पुतीमा जिब्रो छिराउथे उति उनी पनि मेरो लाडोलाई मुख भित्र घुसार्थिन । यो क्रम हामी बीच झन्डै ४५ मिनेट भयो मलाई अब अती भईसकेको थियो। मैले मुखमा नै झार्दिम…? भन्दै सोधे उनले त हुन्छ भन्दै झन जोडले पो भित्र बाहिर गरिदिन थालिन्। बढी नै मजा आएर भित्रै सम्म ठेलिदिएको त घोक्रो सम्मै पुगेछ क्यार लाडो निकालेर खोक्न थालिन् । के सारो ठेलेको हाम्रो चाही शारीर हैन कि क्या हो? भन्दै फेरी बिस्तारै चुस्ने काम सुरु गरिन । यो क्रम जारी रह्यो ख्वात ख्वात ख्वात ख्वात ।मेरो लाडो बाट फुसी झर्यो Tweet
Nepali Sex Story मेरो पहिलो सेक्स अनुभव	JUNGLE MA LAGERA TOLE KO VALU LAE CHIKE – Nepali Sex Story	रातभर चार चोटि चिकेँ	About The Author